औद्योगिक क्षेत्रको दुरवस्था
अहिलेको साम्राज्यवाद एवं विश्व पुँजीवादले निजीकरण, उदारीकरण र व्यापारीकरणको सिद्धान्त र नीतिले नेपालमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिमार्फत विगत केही वर्षयता मुलुकको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त बनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दो क्रममा छ । कुनै समय कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको १९ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान हाल ५.६७ प्रतिशतमा झरी सकेको छ । सरकारको नीतिगत असफलताले मुलुकमा उत्पादनमूलक उद्योगका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा अधिकांश व्यवसायीमा व्यापार प्रतिमोह बढ्दै गएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा मुलुकमा ठूला व्यवसायी घरानादेखि उदीयमान व्यवसायीहरु पनि उद्योगभन्दा ट्रेडिङतिर आकर्षित भएका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार आव ०७३÷०७४को जीडिपीमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान ५.६५ प्रतिशत मात्रै छ । तर थोक तथा खुद्रा व्यापारको क्षेत्रको योगदान भने १३.५२ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राज्यको गलत नीतिका कारण उद्योगीहरु उद्योग सञ्चालन गर्नभन्दा व्यापार गर्न जोड दिएसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको हो ।
कुनै पनि मुलुकको जीडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान कमजोर भएपछि स्वतः त्यस देशको व्यापार घाटा स्वत बढ्ने गर्दछ । हाम्रो स्थिति ठ्याक्कै यस्तै छ । आर्थिक वर्ष ०७३÷७४मा हाम्रो व्यापार घाटा नौ खर्ब पुगेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि निर्माण सामग्रीका वस्तुहरु प्राय ः सबै आयात व्यापारमा निर्भर हुनु परेको छ । हामीले दजनौं सामान निकासी गर्छांै । तर दुःखको कुरा के छ भने यतिका समान निकासी गर्दा पनि हामी एउटा पेट्रोलियम पदार्थसमेत आयात खर्च धान्न सक्दैनौं ।
हाम्रो औद्योगिक क्षेत्र किन अनवरत ओरालो लागिरहेको छ ? यसका प्रमुख दोषीहरु को को हुन् ? के सत्तामा आलोपालो जाने दलहरु यसका दोषी हुन् ? के वैदेशिक नीति ठिक नभएर यसो भएको हो ? कि हाम्रा स्रोत र साधन ठिक ढंगले प्रयोग नभएर यसो भएको हो ? कतै स्वाधीन अर्थतन्त्र नभएको कारणले यसो भएको त होइन ? यी सबै प्रश्नहरु गहन जटील छन् । तैपनि सबै प्रश्नको उत्तर खोज्नु वाञ्छनीय छ ।
मुलुकको आन्तरिक स्रोत साधन प्रचुर छ तर उचित उपयोग छैन । विदेशी सहयोगमा आस गरेर मुलुकले दशकौँ बिताइसकेको छ भने यताको आधा दशकमा त आर्थिक विकासको आधारभूत कार्यान्वयनको क्षमता असाध्यै ह्रास हँुदै गएको छ । विकास खर्च क्रमश ः खुम्चदै गएको छ भने साधरण खर्च फुक्दै गएको छ । केही वर्षदेखि महालेखाको प्रतिवेदनमा स्थानीय विकास मन्त्रालय पनि धेरै अनियमितता र बेरुजु हुने मन्त्रालयमा गरिदै आएको छ । यसको प्रमुख कारण गाउँपालिका, नगरपालिकामा हुने अनियमितता नै हो ।
नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएको चौध वर्ष हुन लागेको छ । पहिलेको तुलनामा अहिले व्यापार घाटा १३ गुणाले बढेको छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिंदा व्यापार घाटा ८२ अर्ब मात्र थियो भने यस वर्ष १० खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कतै डब्लुटीओको सदस्यता बनेर हाम्रो व्यापार घाटा बढेको त होइन । यसबारे गम्भीर बहस हुन जरुरी छ । औद्योगिक वातावरण खस्कदै गएपछि युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने मुलुकको रुपमा दर्ज भएको छ । यसरी देश उँभो लाग्दैन । यसको कहिले अन्त्य हुने हो यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । व्यापारमा भारतसँगको निर्भरता कम गर्ने उद्देश्यका साथ विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिए पनि परनिर्भरता झन बढेर गएको छ । हाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतको हिस्सा दुई तिहाइभन्दा बढी पुगेको छ । यो हाम्रो लागि लाजमर्दो कुरा हो । यसमा सरकार तथा प्रमुख दलहरु मुकदर्शक भएर बसेका छन् ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिर्वतनपछि आम निर्वाचनबाट बनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले साम्राज्यवादी र विस्तारबादी मुलुकको इसारामा आर्थिक उदारीकरण र नीजिकरणको नीति लिएपछि औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था मुलुकको कमजोर रह्यो । देशका उद्योगधन्धाहरु कौडीको मोलमा नीजिकरण गरियो । उनले आफू कुर्सीमा टिक्न जस्तोसुकै राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न तयार भए । अझ भारतीय स्वार्थमा नेपालका सबै महत्वपूर्ण उदोगधन्धा बलिदान गर्ने उनै हुन् । उनकै काल खण्डमा लाखांै भारतीयलाई नागरिता दिने काम भएको हो । गिरिजाले अंगीकृत नागरिकता दिएका भारतीयहरु नै बेलाबेलामा मधेसीका नाममा राजनीति र आन्दोलन गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रघाती सम्झौता,भ्रष्टाचारका ठूला स्क्याण्डल र दरबार हत्याकाण्ड उनकै पालामा भयो ।
मुलुकमा अहिले तीन दर्जन जति संस्थानहरु छन् । जसमा मुस्किलले एक दर्जन मात्र नाफमा चलेका छन् भने बाँकी दुई दर्जन घाटाको अवस्थामा छन् । सरकारले व्यापारिक कारोबार गर्न एक चैत २०१८ मा नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड (राष्ट्रिय व्यापार निगम) स्थापना गरेको थियो । त्यतिबेला दाता मुलुकले अनुदानमा पैसाको साटो वस्तुगत सहयोग नेपालाई दिने चलन थियो । रुस र चीनबाट ठूलै परिमाणमा मेसिनरी उपकरण, ट्याक्टर, मोटरसाइकल, सिमेन्ट, रङ, कृषि उपकरणलगायतका वस्तुगत सहयोग प्राप्त हुन्थ्यो नेपाललाई । यस्ता सामग्री बिक्री गर्न सरकारी संयन्त्र नहँुदा कारोबार गर्न नेशनल ट्रेडिङको स्थापना गरिएको थियो । आज यो नेशनल ट्रेडिङलाई पनि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार छोड्ने बेलामा नीजिकरणका नाममा बिक्री गरी ठूलै रकमको चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । यसरी औद्योगिक क्षेत्रको विकास कसरी होला ?
मोरङ–सुनसरीलाई औद्योगिक नगरी मानिन्छ । डेढ दशकमा सरकारको नीतिका कारण सयभन्दा बढी ठूला उद्योगहरु बन्द भए । चालीसको दशकसम्म मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरु गुल्जार थिए । जताततै उद्योगहरु सञ्चालनमा थिए । रोजगारीको अवसर प्रशस्त थियो । उद्योगबाट उत्पादित वस्तुमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात हुन्थ्यो । तर साठीको दशकको सुरुदेखि उद्योगहरु बन्ध हुने क्रम सुरु भयो । खासगरी सशस्त्र माओवादी र लोडसेडिङका कारण उद्योगहरु बन्द हुँदै गएको उद्योगीहरु बताउँछन् । वि.स. २०५८ सम्म यस औद्योगिक क्षेत्रमा निर्यातमुखी ठूला उद्योगको संख्या १५० भन्दा बढी थिए । हाल ५० वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । यस्तो अवस्था आउनु ज्यादै दुःखको कुरा हो ।
मुलुकमा ठूला उद्योगहरुभन्दा साना ÷मझौला उद्योगहरुलाई बढवा गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । विगतमा पर्याप्त पुँजी जुटाउन नस्कने, विद्युत्सहित ऊर्जाको अभाव र बजार व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याको कारण हजाराँै घरेलु तथा साना उद्योगहरु बन्द पनि भएका थिए । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रका कारण देखाउँदै सरकारले आयातमुखी नीति लिएकै कारण यहाँका उद्योग व्यवसाय प्रतिस्पर्धी बन्न नसकी बन्द हुने क्रम जारी छ । उद्यमीहरुले नेपालमा कच्चा पदार्थ आयात गर्नुभन्दा तयारी वस्तुको भन्सार तथा अन्तःशुल्क दर त्योभन्दा कम भएकोले उत्पादित वस्तुहरु प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् । नेपाल विश्वव्यापार संगठनको सदस्य भएको र दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रकोसमेत सदस्य भएको नाताले भन्सार दर क्रमश ः घटाउँदै जानुपर्ने व्यवस्थाअनुसार सरकार आयातमुखी नीति लिन बाध्य भएको हो । आयातको अनुपात बढ्दै जाँदा सरकारको भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्व त बढ्छ, तर त्यसले स्वदेशी उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ । समान उत्पादन श्रम र अन्यलागतका कारण स्वदेशी उत्पादन केही महँगो पर्न जाँदा आयातित वस्तुले त्यसको ठाउँ ओगट्छ र स्वदेशी उद्योगहरु प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकी धराशायी हँुदै जान्छन् ।
अहिले मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको तहमा गइसकेको छ । अब प्रदेश स्थानीय तहमा नयाँ नयाँ निर्माणका काम हुन्छन् । यसले आयात झनै बढाउँछ । स्थानीय उत्पादन बढ्नेभन्दा घट्दै जानेछ । पहिलो पटक संघीयताको अभ्यासमा गइरहँदा अफ्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले प्रदेश सरकारले ढिलो नगरी उत्पादन, राजस्व र रोजगारी बढाउने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । उत्पादन बढाउन औद्योगिक क्षेत्र विस्तार र नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरु स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिनुपर्दछ । संघीयतामा गइसकेपछि आफ्नो प्रदेश आफँै बनाउँछौ भन्ने संकल्प प्रदेश सरकार र सबै जनप्रतिनिधिहरुमा हुन जरुरी छ । अब केन्द्र सरकारको आशा गर्नु हँुदैन । गरेर सम्भव पनि छैन । उत्पादन बढाउने,राजस्व वृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने एउटै माध्यम औद्योगिक विकास नै हो । तीव्र औद्योगिक विकासविना संघीयता सफल हुन सक्दैन ।
कुनै पनि देशको समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड नै आर्थिक विकास र औद्योगिक कारणको प्रारुप हो । राष्ट्रको यावत् विकासको जग भन्नु नै औद्योगिक विकासको गतिशीलता हो । अठारौं शताव्दीमा बेलायत र फ्रान्समा भएका औद्योगिक क्रान्तिको उपज आज ती मुलुकहरु विश्वमा विकसित राष्ट्रको बढ्दो आर्थिक विकासमा उभिएका छन् । औद्योगिक विकास गर्न सर्वप्रथम हाम्रो अर्थतन्त्र स्वधीन हुनुपर्दछ । हाम्रा नीति र प्राथमिकता फेरिनुपर्दछ । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्दछ । नेपाल सार्वभौमिक सत्ता सम्पन्न मुलुक भए तापनि आर्थिक दृष्टिले भारतसँग पराधीन देखिन्छ । यसको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।